ပူးတစ်ကောင် ရဲ့လက်ရာ: @ ပြဿနာ
တော်သေးတာပေါ့ဗျာ ခုဏကျွန်တော်ပြောတဲ့ ပန်းမဟုတ်လို့
တော်သေးတာပေါ့ .. ပြတ်ပြီပဲပြောသွားလို့ ... ဓါးနဲ့မထိုးသွားတာ ကံကောင်းတယ်... ဟတ်ဟတ်
မဟုတ်တာဗျာ. “ ပန်းနဲ့မပေါက် ” ရဘူးဗျ. (လုပ်စရာလား)
နားရွက် လေးကြားထဲ ညှပ်ပီး ယုယုယယ “ပန်” ပေးရတယ်
“ငတုံး” ရဲ့ လို့ သာ သူ့ကို ပြောလိုက်ပါတော့ဗျာ :P
ပန်းနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုတာ ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေတာ။ တကယ်ခံရရင် မလွယ်ကြောပဲဗျ။ ပေါက်တဲ့ပန်းကလည်း ဂေါ်ဖီပန်းဆိုတော့ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့ဗျို့။
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ပြသနာဖြစ်တယ် လာကြည့်ပါဆို့လို့ လာကြည့်တာ ဒီမှာ ပန်းပုံပြင် ခင်းနေတာကိုး။
တော်သေးတာပေါ့.. ပန်းအိုးနဲ့မပေါက်လို့.. ဖြစ်ရလေဗျာ..
အဟား.... ဂေါ်ဖီင်္ပန်းတဲ့ဗျာ..... အားရပါးရ ရီသွားတယ်... :P
ကြော်စားဖို့ပေးတယ်ဆို တော်သေးတယ်.. ပန်ဖို့ဆိုတော့ စိတ်ဆိုးလောက်ပါပေတယ်.. ဟားဟား
အာဂျာ ..ကိုပူး ကစေတနာနဲ့ ကော်ဖီပန်းနဲ့ ပေါက်တာ ကိုစိတ်ဆိုးရတယ်လို့ဂျာ ၊၊ ကော်ဖီပန်း ဒီလောက်ဈေးကြီးတာကို....
ခင်ဗျားဗျာ... ဆိုးပါ့။ တကယ်ဆို...
အရွက်တော့ အရွက်ပဲ စာရွက်
အပင်တော့ အပင်ပဲ ဘောပင် ဆိုပြီး... အဲဒါမျိုးတွေ ဟင်းချက်ကျွေးရမှာ... ဟီ ဟိ...
ဟိုပန်း လေး လေကွာ
ဦးပူးနော်.. မမချနိုး ဂို အဲရို ရုတ် နဲ့နော်...
မမ ချနိုး ချိတ်ချိုး ရိတ်မယ်.. တိယား...
ဦးပူးရေ.. စိတ်ဆိုးနဲ့နော်.. တကယ်မအားလို့မရောက်ဖြစ်တာပါ...
သိလား.. :D ဟားဟား.....တော်တော်လေးကိုရယ်ရတယ်...
shut down လုပ်ပြီးတဲ့အထိကိုရယ်ရတုန်းပဲ... ဟီးဟီး...
ဆောရီးပါကိုသက်နောင် ကျွန်တော်လွှဲရေးထားတဲ့ အမည်က ကိုသက်နောင်အမည်နဲ့ သွားတူနေတာကိုး ကောင်မလေးစိတ်ဆိုးသွားရင်တော့ ပြန်ချော့လိုက်ပါဗျာ ကြေအေးမှုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပန်းပေးလိုက်လေ "ဂေါ်ဖီပန်း"